1Sa 11 | Shona | STEP | Zvino Nahashi muAmoni wakakwira akavaka misasa yake paJabheshigiriyadi kuzorwa naro; zvino varume vose veJabheshi vakati kuna Nahashi, "Itai sungano nesu tikushumirei."
Sauro anokunda vaAmoni
1 Zvino Nahashi muAmoni wakakwira akavaka misasa yake paJabheshigiriyadi kuzorwa naro; zvino varume vose veJabheshi vakati kuna Nahashi, "Itai sungano nesu tikushumirei."
2Nahashi muAmoni akati kwavari, "Ndichatenda kuita sungano nemi kana meso enyu ose orudyi achitumburwa, kuti ndinyadze vaIsiraeri vose nazvo."
3Vakuru veJabheshi vakati kwaari, "Titenderei mazuva manomwe, titume nhume kunyika yose yaIsiraeri, zvino kana pasina ungatiponesa, tichabuda kwauri."
4Zvino nhume dzikasvika paGibhiya, kwaSauro, dzikataura mashoko iwayo kuvanhu; vanhu vose vakachema kwazvo. 5Zvino Sauro wakabva kumunda achitinha mombe dzake; Sauro akati, "Vanhu vanonzweiko zvavanochema kudai?" Akaudzwa mashoko avarume veJabheshi. 6Ipapo Mweya waMwari wakauya pamusoro paSauro nesimba, achinzwa mashoko iwayo, kutsamwa kwake kukamutswa kwazvo.
7Akatora nzombe mbiri, akadziguranya ndokutuma nhindi idzo kunyika yose yaIsiraeri namaoko enhume, akati, "Ani nani unoramba kubuda nokutevera Sauro naSamueri, uchaitirwa nzombe dzake saizvozvo." Zvino kutya, kwakabva kuna Jehovha, kwakabata vanhu, vakabuda vose-vose. 8Iye akavaverenga paBhezeki; vana vaIsiraeri vakasvika zviuru zvina mazana matatu, navarume vaJudha zviuru zvina makumi matatu. 9Vakati kunhume dzakauya, "Udzai varume veJabheshigiriyadi, muti, `Mangwana kana zuva ropisa, mucharwirwa.' " Nhume dzikaenda, dzikaudza varume veJabheshi, ivo vakafara.
10Naizvozvo varume veJabheshi vakati, "Mangwana tichabuda kwamuri, mutiitire henyu sezvamunoda." 11Fume mangwana Sauro akagadzira vanhu, akavaita mapoka matatu, vakapinda pakati pemisasa nenguva yamangwanani vakauraya vaAmoni kusvikira zuva ropisa; zvino vakasara vakaparadzirwa, hakuna kusara vaviri pamwechete.
12Zvino vanhu vakati kuna Samueri, "Ndianiko wakati, `Sauro ungatibata ushe here?' " Hendei, tivauraye. 13Sauro akati, "Ngakurege kuurawa munhu mumwe nhasi, nokuti Jehovha wakarwira Isiraeri."
14Zvino Samueri akati kuvanhu, "Hendei Girigari, tinovandudza ushe ipapo." 15Vanhu vose vakaenda Girigari, vakagadza Sauro ave mambo wavo pamberi paJehovha paGirigari, vakabayirapo zvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa pamberi paJehovha; Sauro navarume vose vaIsiraeri vakafara kwazvo ipapo.